समय अनुसारको प्रविधिलाई आत्मसात नगरे सफल हुन सकिँदैन
२०७६ भाद्र २० गते , शुक्रवार प्रकाशित
अध्यक्ष, नयाँपाटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.
‘सम्पूर्ण वित्तीय समाधानको पहिलो छनौट, नयाँपाटी साकोस’ मूल नाराका साथ २०५४ सालमा २८ जना यूवाहरुले २८ सय रुपैयाँबाट शुरु गरेको संस्थाले आज ठूलो फड्को मार्न सफल भएको छ । यस अवधिमा आफ्ना सदस्यहरुको आर्थिक तथा सामाजिक स्तरमा सुधार ल्याउन संस्था निकै सफल भएको छ । संस्थाले नवीनतम प्रविधिलाई भित्राएर सदस्यहरुलाई आधुनिक वित्तीय सेवा दिन शुरु गरेको छ । संस्थाले एटिएम, स्मार्ट–बैंकिङ्ग र एस.एम.एस. बैकिङ्ग जस्ता प्रविधिलाई आत्मसात गरी अगाडि बढेको र प्रतिस्पर्धी वित्तीय बजारमा समयसापेक्ष प्रविधिको प्रयोग गरी सेवा दिन थालेको अध्यक्ष विजयकुमार श्रेष्ठ बताउँछन् । सदस्यलाई सन्तुष्ट पार्न सकेमात्र संस्था जीवन्त रहने उनको धारणा छ । सोही अुनरुप आगामी दिनमा पनि यस्तै नयाँ प्रविधि भित्राई एक उत्कृष्ट नमूनायोग्य संस्थाको रुपमा स्थापित गर्ने लक्ष्य रहेको उनले बताए । आर्थिक रुपमा कमजोर, विपन्न र समुदायमा पछि परेका महिला, दलित, जनजातिहरुलाई आर्थिक क्रियाकलापमा संलग्न गरि आर्थिकस्तर बृद्धि गर्न संस्थाले २०६१ साल बाट लघुवित्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएकोे छ । त्यसबाट ३२ सय जना लाभान्वित भएका छन् । संस्थाले सामाजिक उत्तरदायित्वलाई सँगसँगै बहन गर्दै लगेको छ । सदस्यका हरेक आवश्यकता पूर्ति गर्नेदेखि समुदायको हितमा संस्था क्रियाशील रहेको छ । संस्थाको समग्र अवस्था, सदस्यलाई दिने सेवा सुविधा र समग्र अभियानका विषयमा अध्यक्ष श्रेष्ठसँग गरिएको कुराकानी:
नयाँपाटी बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको शुरुवात कसरी भएको थियो ?
हामीले यो संस्था शुरु गर्नुभन्दा अगाडि यस क्षेत्रमा कुनै पनि सहकारी थिएन । बैंकको अनुपस्थिति रहेकाले यहाँका जनताले वित्तीय सेवा लिन टाढा सम्म धाउनुपर्ने बाध्यता थियो । यस्तो परिस्थितिमा यहाँका २८ जना यूवा मिलेर २०५४ सालमा हामीले संस्था शुरु गरेका हौं । यो संस्था शुरु हुनुभन्दा अगाडि स्थानीयलाई स–सानो रकम जम्मा गर्न र ऋण लिनका लागि साह्रै गाह्रो थियो । आफ्नो वित्तीय आवश्यकता पूरा गर्न र स्थानीयलाई सहज रुपमा वित्तीय सेवा उपलब्ध गराउने उद्देश्यले यो संस्था शुरु भएको हो । यो संस्था स्थापनामा अग्रज दाईहरुको अझ ठूलो देन छ । २८ जनाबाट २८ सय रुपैया लिएर संस्था शुरु भएको हो । शुरुका दुई वर्ष २०५२ देखि २०५४ सम्म हामीले समुहमा मिलेर कारोबार गरायौं । २०५४ सालमा यसलाई बैधानिकता दिइएको हो । हालसम्म आइपुग्दा संस्थाको १ रोपनी ४ आना क्षेत्रफलमा बनेको सुविधासम्पन्न भवन रहेको छ । जोरपाटी क्षेत्रमा यसै वर्षभित्र आफ्नै भवन बनाउने योजना रहेको छ । संस्थामा बाल बचतकर्तासहित ९ हजार २ सय सदस्य आवद्ध रहेका छन् ।
२१ वर्षको अवधिमा संस्थाले के गर्न सक्यो ?
यो संस्था खुलेपछि यस क्षेत्रका सबै सदस्यहरुको आर्थिक स्तर राम्रो भएको छ । सदस्यहरुको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न संस्थाले खेलेको भूमिकालाई सबल पक्षको रुपमा लिन सकिन्छ । २८ सय रुपैयाँबाट शुरु भएको संस्था अहिले हामी ९०–९५ करोडको लक्ष्य लिएर अघि बढेका छौं । भने यस अवधिमा ८२ करोड ४३ लाखको ब्यालेन्स सिट बनेको छ । यहाँ जति पनि व्यवसाय भएका छन् र सदस्यको आर्थिक स्तर बढेको छ, यो नयाँपाटी साकोसकै कारणले भएको हो । यहाँका सदस्यहरुको वाणिज्य र विकास बैंकहरुसम्म पहुँच पुगेको दुईतीन वर्ष मात्र भएको छ । त्यो भन्दा अगाडि कुनै विकल्प थिएन । सहकारीबाट नै उनीहरुले सेवा पाएका छन् । पछिल्लो समयमा नयाँपाटी साकोसको देखासिखीमा धेरै संस्थाहरु खुलेका छन् । यस क्षेत्रका सदस्यको आर्थिक सामाजिक रुपान्तरणमा सहकारीको भूमिका महत्वपूर्ण छ ।
सदस्यलाई आर्थिक रुपमा सबल बनाउन संस्थाले कस्ता कार्यक्रम अघि बढायो ?
हामीले सदस्यहरुलाई सबल बनाउन विभिन्न सीपमूलक तालिम सञ्चालन गर्‍यौं । उनीहरुको रुचि र क्षमताका आधारमा तालिम दियौं । जस्तै मैनबत्ती, धुप बनाउने, च्याउ खेती, ब्युटिसियन, पशुपालन, कृषि तथा नगदे बाली सम्बन्धि तालिम दियौं । जसबाट सदस्यको आर्थिक स्तर क्रमशः बढ्दै गएको छ । सरल र सस्तो व्याजदरमा व्यवसाय सञ्चालनको लागि ऋण लगानी गर्दै आएका छौं । त्यसका साथै हामीले सामाजिक उत्तरदायित्व अन्तर्गत समयसमयमा स्वास्थ्य शिविर, उद्घोषण तालिम, गरिब तथा जेहेन्दार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति जस्ता काम गर्दै आएका छौं । बचत ऋणको कारोबारबाट कमाएको केहि पैसालाई सदस्य र समुदायकै हितको लागि खर्च गरिराखेका छौं । हामीले विपन्न महिलाहरुको आर्थिक अवस्थामा सुधार ल्याउन लघुवित्त कार्यक्रम पनि सञ्चालन गरेका छौं । साथै २०७२ सालमा महाभूकम्पबाट सदस्यहरुको घरबार तहसनहस हुदाँ सदस्यको राहतको लागि संस्थाले २ प्रतिशत व्याजदरमा सहुलियत वापत भूकम्प राहत ऋण रु १ लाख प्रति सदस्य लगानी गरेका थियौ । जसले थोरै भए पनि सदस्यहरुलाई सहज भएको हामिले महशुस गरेका छौ ।
कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा पनि लगानी गर्नुभएको छ ?
विगत ४ वर्षदेखि कृषिलाई केहि टेवा पु¥याउनुपर्छ भनेर लागिपरेका छौं । कृषि भनेर धान र मकैमात्र लगाएर हुँदैन । नगदेबाली, गोलभेँडा, तरकारी जस्ता खेतीमा लगानी गरेका छौं । कृषिलाई व्यवसायिक बनाउन हामीले अन्य ऋणको तुलनामा सस्तो व्याजदरमा दिएका छौं । कृषि ऋण लिएर कृषि नै गर्नुपर्छ, अन्य क्षेत्रमा लगानी गर्न पाईंदैन । अहिले यस क्षेत्रमा बाहिरी जिल्लाका मानिसहरु आएर कृषि फर्महरु खोल्ने क्रम पनि बढेको छ । यसमा हामीले सहयोग पु¥याएका छौं ।
संस्थालाई दिदीबहिनीहरु बीच लघुवित्तको कार्यक्रम पनि शुरु गरेको छ, यसको प्रभावकारिताको विषयमा केहि बताइदिनुस् न,
२०६१ सालबाट हामीले लघुवित्त शुरु गरेका हौं । त्यो समयमा महिलाहरुको आर्थिक अवस्था कमजोर थियो र उनीहरु अगाडि आउँन चाहँदैनथे । महिलाहरुको छुट्टै समुह बनाएर कारोबार ग¥यो भने उनीहरुको आर्थिक तथा क्षमताविकास गर्न सकिन्छ भन्ने सोच हामीमा आयो । मासिक एकसय रुपैयाँ बचतबाट यो कार्यक्रम अघि बढायौं । व्यवसाय गर्न चाहने लघुवित्तका सदस्यलाई २५ हजार रुपैया ऋण लगानी गर्न थाल्यौं । अहिले आएर लघुवित्तले ठूलो रुप लिएको छ । महिलाहरु सक्रिय भएका छन् । संस्थाको हरेक क्रियाकलापलाई सहयोग पु¥याउँदै आएका छन् । उनीहरुमा आर्थिक अनुशासन छ । लघुवित्त समूह बढ्दै गएको छ । १३९ वटा समुह भइसकेका छन् । ३ हजार २ सय महिला लघुवित्तमा आवद्ध छन् । लघुवित्तका सदस्यहरुलाई बचत रकम पर्याप्त भएपछि संस्थाको सदस्यको रुपमा हामीले लिन्छौं ।
लघुवित्त कार्यक्रम अन्तर्गत कसरी ऋण लगानी र बचत संकलन गर्नुहुन्छ ?
हामीले प्रत्येक दिन कुन कुन कर्मचारी कुन कुन समूह केन्द्रमा जाने भनेर सेड्युल बनाएका हुन्छौं । हरेक केन्द्रमा आवद्ध सदस्यहरु त्यहाँ जम्मा हुुन्छन् । तोकिएको समयमा आ–आफ्नो केन्द्रमा भेला भएर नियमित बचत पनि गर्नुपर्छ र लगेको ऋणको किस्ता पनि तिर्नुपर्छ । ऋण लिनको लागि पनि त्यहि माग गर्न सकिन्छ । एक जनाले ऋण लिँदा त्यहि समुहका ४–५ जनाले जमानी बस्नुपर्छ । यसले गर्दा लघुवित्त कार्यक्रम राम्रोसँग सञ्चालन भइराखेको छ । शुरुमा २५ हजार मात्रै ऋण दिने गरेको भएपनि अहिले २ लाख ५० हजार रुपैयासम्म दिने गरेका छौं । कृषि र पशुपालनमा नै हामीले बढि लगानी गरेका छौं । हामीले समाजका अति विपन्न वर्गको लागि घुम्ती सहयोग कोष भनेर सञ्चालन गरेका छौं । स–सानो रकम बिना व्याज त्यस्ता मानिसहरुलाई दिन्छौं । ताकि यसबाट त्यस्ता वर्गको आर्थिक स्तरमा सुधार पु¥याउन सकियोस् । हामीले समुहको सिफारिशमा २० हजार रुपैयासम्म व्यापार व्यवसाय गर्न दिन्छौं । हालसम्म ४५–५० जनाले त्यस्तो कोषबाट रकम प्राप्त गरिसकेका छन् । अति विपन्नको आर्थिक अवस्था सुधार गर्न यो कार्यक्रम सहयोगी भएको छ ।
नयाँपाटीले टेक्नोलोजीलाई पनि भित्राएर सदस्यलाई सेवा दिन थालेको छ, यसको अवधारणा कसरी आयो ?
हामीले संस्थाको कार्यक्षेत्र र सदस्यलाई दिने सेवासुविधा बढाउँ भन्ने उद्देश्यका साथ एटिएम सेवा शुरु गरेका हौं । २०७४ सालमा नयाँ सञ्चालक समिति आयो । यहि समितिले बैंकिङ र एटिएम सेवा सञ्चालन गर्ने निर्णय ग¥यो । हामीले बिकु लगायतका केहि संस्थाको अवलोकन भ्रमण पनि ग¥यौं । उनीहरुले प्रयोगमा ल्याएको प्रविधिका बारेमा जानकारी लियौं । त्यहि बेला सोल्टी होटलमा एउटा सेमिनार भएको थियो । त्यहाँ पनि प्रविधिको बारेमा धेरै कुरा भएको थियो । प्रविधि नभई नहुने रहेछ भन्ने हामीलाई लाग्यो । सोही अनुरुप स्मार्ट बैंकिङ र एटिएम सेवा शुरु गरेका हौं । केहि समयमा अर्को पनि एटिएम मेशिन थप्ने योजना छ भने टेलरहरुलाई पनि स्मार्ट टेलरको रुपमा अघि बढाउने योजना छ साथै लकर सेवा पनि थप गर्ने योजना छ । यस आर्थिक वर्षभित्रमा यो काम पूरा गर्छौं । नयाँ पिँढीलाई लक्षित गरी एटिएम सेवा सुचारु गरेका छौं । कतिपय सदस्यले मोबाइल, कम्प्युटर र एटिएम चलाउन सक्नुहुन्न । उहाँहरुलाई मात्र हेरेर भएन । त्यसैले नयाँ पिँढी लक्षित कार्यक्रम ल्याएका हौं । बैंकले दिने सेवासुविधा सहकारीले किन दिन सक्दैन ? सहकारीले पनि सबै प्रविधिहरुलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । सदस्यले स्मार्ट–बैंंकिङ मार्फत बत्ती, पानी, टेलिफोन, इन्टरनेटको बिल भुक्तानी गर्न सक्छन् भने सदस्यहरुले फण्ड ट्रान्सफर पनि गर्न सक्छन् र निकट भविष्यमा बैंकहरुमा पनि फण्ड ट्रान्सफरको लागि तयारी गरिराखेका छौं ।
सदस्यले एटिएम सुविधा लिए बापत कति शुल्क तिर्नुपर्छ ?
गत बैशाखबाट एटिएम सेवा सुरु गरेका हौं । यस अवधिमा ३ सय जनाले एटिएम कार्ड लिइसकेका छन् । एटिएम सेवा बैंकको तुलनामा सस्तो छ । २०७६ असार मसान्तसम्म हामीले निःशुल्क कार्ड वितरण ग¥यौं । साउनदेखि प्रति कार्ड ३ सय रुपैया लिन्छौं । कार्डको अवधि ४ वर्षको हुन्छ । हरेक वर्ष नविकरण शुल्क वापत २ सय रुपैया बुझाउनुपर्छ । एटिएमबाट रकम निकाल्दा एक पटकमा २ रुपैया शुल्क लाग्छ । एकपटकमा ५ सय देखि १६ हजार निकाल्न मिल्छ । एक दिनमा ५० हजारसम्म निकाल्न सकिन्छ । हामी एससिटि नेटवर्कसँग आवद्ध छौं ।
एटिएमप्रति सदस्यको आकर्षण कस्तो पाउनुभयो ?
एटिएम सेवा शुरु गरेसँगै सदस्य वृद्धि हुँदै गएको छ । नयाँपाटी साकोस भौतिक रुपमा चाबहिलमा पुग्न नसके पनि एटिएम कार्डले पु¥याइदिएको छ । एससिटि र यूनियन पेको नेटवर्कको प्रयोग भएका हरेक बैंकबाट पैसा निकाल्न सकिन्छ । ती बैंकमा नयाँपाटीको एटिएम प्रयोग गर्दा एक पटकमा ३० रुपैया काट्छ । यो नेटवर्क अन्तर्गत कुनै पनि बैंकबाट मुलुकभरबाट पैसा निकाल्न सकिन्छ । यसले गर्दा संस्थामा सदस्य बन्ने क्रम बढ्दो छ । हामीले एटिएम शुरु गरेपछि यस क्षेत्रमा रहेका सबै संघसंस्थाका कर्मचारीले यहि एटिएममार्फत पैसा झिक्ने गरेका छन् । जसले गर्दा एटिएममा निकै चाप बढेको छ । एटिएमले उनीहरुको समय र पैसा दुवै बचत भएको छ । समय अनुसारको प्रविधिलाई आत्मसात गर्न सकिएन भने हामी सफल हुन सक्दैनौं । सदस्यलाई गुणस्तरीय सेवा सुविधा नदिइकन संस्था जीवित रहँदैन । संस्था जीवन्त रहन सदस्यलाई दिुनपर्ने सेवामा समयानुसार परिमार्जन गर्दै लैजानुपर्छ । यसले संस्थालाई निरन्तर अगाडि बढाउन सहयोग मिल्छ । हामीले प्रभु ग्रुपको प्ष्यकप मेशिन पनि राखेका छौं । त्यसबाट सदस्यले विभिन्न बैंकको खातामा पैसा जम्मा गर्न सक्दछन् । बत्ती, पानी, बिजुली बिल भुक्तानीका साथै रेमिटान्स पनि गर्न सकिन्छ । बिना शुल्क त्यो मेशिन प्रयोग गर्न पाइन्छ ।
तपाईंको २२/२३ वर्षको अनुभवमा सहकारी के रहेछ ?
सहकारी भनेको एक आपसमा मिलेर सहकार्य गर्ने हो । आफ्नो आर्थिकस्तर माथि उठाउन एक आपसमा मिलेर गरिने सामुहिक व्यवसाय हो । सहकारी सदस्यमुखी हुनुपर्छ र सदस्यलाई सेवा सुविधा दिनुपर्छ । सदस्यलाई सेवासुविधा नदिने हो भने त्यो सहकारी हुन सक्दैन । जसले सदस्यलाई बढि प्राथमिकता दिएर सेवा सुविधा दिन्छ, त्यो नै वास्तविक सहकारी हो ।
बजारमा त सहकारी र साहुकारी छुट्टयाउन गाह्रो छ नि ?
सहकारी ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ आएको छ । सहकारी विभागले सन्दर्भ व्याजदर तोकेको छ । अब साहुकारी सहकारीहरु वास्तविक सहकारीमा रुपान्तरण हुन्छन् भन्ने हाम्रो विश्वास छ । समुदायमा आधारित संस्थाहरु रहन्छन् र सदस्य केन्द्रित नहुने र आफुखुसी चलेका संस्थाहरुलाई ऐननियम र सन्दर्भ व्याजदरले ट्रयाकमा ल्याउँछ भन्ने लागेको छ ।
सहकारीमा व्याजदर तोक्नु ठिक हो ?
सहकारीमा पैसाको किनबेच हुन्छ तर अपेक्षित किनबेच राम्रो होइन । लिने र दिनेको स्प्रेड दर ६ प्रतिशत हो । तर २४ प्रतिशतमा लिएर ३० प्रतिशतमा लगानी गर्ने भन्ने कुरा राम्रो होइन । सदस्यले पनि कमाइ अनुसार व्याज तिर्ने हो । सदस्यले ३० प्रतिशत ऋण लिएर तिर्न सक्छन् कि सक्दैन त्यो हेर्नुपर्छ । सन्दर्भ व्याजदर आउनु जायज हो । हामीले त्यहिँ भित्र रहेर लगानी गरेका छौं । बैंकको ब्याजदर बराबर बचतमा र बैंककै ब्याजदर बराबर ऋणको ब्याज लिएका छौं । यसर्थ हाम्रो लागि सन्दर्भ ब्याजदर उपयुक्त छ ।
न्यूरोडमा रहने सहकारीले दैनिक करोडको कारोबार गरेका छन् । त्यहाँका संस्थाले अन्धाधुन्द बिना धितो लगानी गरेका छन् । सम्बन्धका आधारमा ऋण लगानी गरेका हुन्छन् । त्यस्ता संस्था निश्चित व्यक्तिले सञ्चालन गरेका हुन्छन् । तर यो संस्था पूर्णरुपमा समुदायमा आधारित छ । समुदाय प्रतिको दायित्व निभाउँछौं । समुदायकै पैसा लिन्छौं र समुदायलाई नै दिन्छौ । नाफा कमाउँदा पनि समुदायलाई नै बाँड्छौं । सन्दर्भ व्याजदर अहिले लागु भएको छ । तर हामीले १६ प्रतिशत भन्दा तल नै लगानी गरिरहेका छौं । जस्तै व्यापार व्यवसाय ऋणमा १३ प्रतिशत, अन्य शिर्षकको ऋणमा भने १५ प्रतिशत र लघुवित्त ऋणमा भने १६ प्रतिशत छ । ब्याजदर तय गर्दा बजार दरलाई हेर्नुपर्छ । जबकि बजार दर नै १०/१२ प्रतिशत छ भने २५/२६ प्रतिशतमा ऋण लिएर सदस्य कहिले उँभो लाग्ने ? यस्तो ब्याज निश्चित क्षेत्रमा ठिक थियो । हिजोको दिनमा जग्गाको काम गर्नेले बैनाको भरमा जग्गा किनबेच गर्थे । जति ब्याज लिए पनि समस्या थिएन । व्यवसाय गर्नेहरुलाई गाह्रो छ । प्रोजेक्ट गर्नलाई ऋण लगानी गरे जस्तो गरेर व्यवसाय गर्नेलाई सुहाउँदैन ।
एक्सेस ब्राण्डमा प्राप्तिका लागि कसरी काम गरिराख्नु भएको छ ?
संस्था एक्सेस ब्राण्डको दोश्रो ब्याचमा सहभागि भएर काम गर्न थालेको लामै समय भएको छ । पल्र्स अनुगमनले भनेको सम्पूर्ण सूचांकहरुलाई हामीले पूरा गरेका छौं । संस्थालाई गुड फर पेमेन्ट प्रकरणले केहि समस्या ल्याएको थियो । नयाँ सञ्चालक समिति आएदेखि नै त्यसलाई समाधान गर्ने तर्फ लागि परेका छौं । हिजो देखिको पूराना कर्जाहरुलाई ताकेता गरेर घटाउने र खराब कर्जालाई ५ प्रतिशत तल झार्ने योजना छ । यहि वर्षभित्र ब्राण्ड प्राप्त गर्ने हिसाबले काम गर्दैछौं । राष्ट्र बैंकले बैंकहरुलाई सबै काम गर्ने अधिकार दिएको छ । तर सहकारीलाई यो पनि नगर, त्यो पनि नगर भनेको अवस्था छ । यसले गर्दा हामीले जति विस्तार गर्नुपर्ने थियो, त्यो गर्न सकिराखेको अवस्था छैन । ब्राण्डिङमा गएपछि ऋण सावाँ ब्याज गरेर घटाउनुपर्छ । तर सदस्यहरुले ब्याज मात्र तिर्न खोज्छन् । तरलता बढि हुँदा संस्थामा त्यसै राख्ने कुरा भएन । त्यस्तो अवस्थामा सदस्यहरुलाई केहि अफर दिएर काम गर्ने गरेका छौं । हामीले सदस्यहरुलाई सुविधा ऋण भनेर दिएका छौं । त्यस बाहेक हामीले साँवा ब्याजमा नै बढि ऋण लगानी गरेका छौं । ऐनले सदस्य बनेको ३ महिना नकाटी ऋण लगानी नगर भनेको छ । यसले हामीलाई समस्या परेको छ । शहरी क्षेत्रमा यो ऐन लागु हुनु ठिकै हो । तर हामी समुदायमा आधारित संस्थाको रुपमा ग्रामीण क्षेत्रमा रहेर काम गरेका छौं । यसले गर्दा तरलता बढि हुने र सदस्यले भने ऋण नपाउने स्थिति छ । यसले गर्दा तरलता व्यवस्था गर्न हामीलाई समस्या भएको छ । कतिपय अवस्थामा खराब ऋण बढेको अवस्था छ । सदस्यहरुले एक किस्ता ऋण तिरेन भनेपनि प्रोभिजन गर्नुपर्छ । त्यसभन्दा बाहेक हामीले सबै सुचांकहरु पूरा गर्दै गएका छौं ।
संस्थाका लगानीका क्षेत्र कुन कुन छन् ?
कृषि तथा पशुपालन, व्यापार व्यवसाय, वैदेशिक रोजगार, शैक्षिक, आवास निर्माण, जग्गा खरिद, लघुवित्त क्षेत्रमा लगानी गर्दै आएका छौं ।
बचत ऋण बाहेक सदस्यहरुलाई संस्थाले के कस्ता सुविधा दिँदै आएको छ ?
हामीले शुरुदेखि विभिन्न प्रकारका सामाजिक क्रियाकलाप सञ्चालन गर्दै आएका छौं । गरिब जेहेन्दारहरुलाई सहयोग गर्न मुठी दान कोष शुरु गरेका छौं । विपन्न वर्ग र जेहेन्दार विद्यार्थीलाई त्यसै कोषबाट सेवा गर्छौं । हामीले ठूलो प्रोजेक्टको रुपमा राहत कोष ल्याएका छौं । कुनै पनि सदस्यको मृत्यु भएको खण्डमा आश्रित परिवारका सदस्यलाई ५० हजार दिन्छौं । संस्थाको सदस्य बनेसँगै प्रत्येक सदस्यले उक्त कोषमा १ हजार प्रत्येक वर्ष जम्मा गर्नुपर्छ । १० वर्षभित्र सदस्यको मृत्यु भयो भने ५० हजार पाउँछन् । र यदि भएन भने ५ हजार थपेर १५ हजार रुपैया फिर्ता गर्ने गरेका छौं । लघुवित्त समुहका सदस्यको मृत्यु भएमा ५ हजार, सदस्यको श्रीमानको मृत्य भएमा ५ हजार र सुत्केरी हुँदा १ हजार राहत दिन्छौं भने दुर्घटनामा परी मृत्यु भएमा ३ हजार उपलब्ध गराउँछौं । संस्थाले हालै मात्र नेशनल लाईफ इन्सुरेन्स कम्पनीसँग बीमा सम्झौता गरेका छौं । संस्थाले बीमाको लागि अग्रिम लगानी गरिदिन्छ । एकपटक बीमा गरेपछि ५ वर्ष अवधिको हुन्छ । त्यस अवधिमा सदस्यको मृत्यु भएमा ५० हजार पाइन्छ त्यसमा दुर्घटना वीमा पनि समावेश गरिएको छ । केहि नभएको खण्डमा केहि प्रतिशत थपेर कम्पनीले फिर्ता गर्छ । निकट भविष्यमा औषधी उपचारको बीमा गर्ने योजना छ । हामीले एउटा अस्पतालमा स्वास्थ्य उपचारको लागि सम्झौता गर्दैछौं र सदस्यहरुले हरेक उपचारमा १० देखि १५ प्रतिशत छुट पाउँछन् ।
संस्थाको आगामी योजना के छ ?
गागलफेदीमा सेवा केन्द्र र गोकर्णको हनुमान चोकमा एटिएम मेशिन थप गर्ने योजना छ । त्यसैगरी सदस्यहरुलाई लकर सुविधा दिने तयारी गरिरहेका छौं ।